ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: April 2010
ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံတွင် ယခုကဲ့ သို့ ဝတ်ဆင်ခြင်းကို ဥပဒေအရတားမြစ်တော့ မည်...
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသည် တွင် ဦးခေါင်းမှ ခြေဖျားအထိ မျက်နှာအပါအ၀င်တစ်ကိုယ်လုံးလွှမ်းခြုံဖုံးအုပ်ထား
သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမျိူးသမီးများဝတ်စုံ burka ကိုအများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သောနေရာများတွင်
၀တ်ဆင်ခြင်းကို လုံးဝတားမြစ်သည့်ပထမဦးဆုံးဥရောတိုက်ရှိ နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ ပါသည်...
ထိုသို့ ၎င်းတို့ ၏မျက်နှာအပါအ၀င်တစ်ကိုယ်လုံးဖုံးဝတ်စုံကို အများသူငါသွားလာနေထိုင်ရာနေရာများတွင်
၀တ်ဆင်သူအမျိူးသမီးများကို ထောင်ဒါဏ်အပြစ်ပေးနိုင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို ပါလီမန်က အတည်ပြုခဲ့ 
သို့ သော်ထိုဥပဒေမူကြမ်းကို ဘယ်လ်ဂျီယံဆီးနိတ်လွှတ်တော်မှအတည်ပြုရဦးမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် ဂျူ
လိုင်လ လောက်တွင်မှ ဥပဒေအဖြစ်သက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်...
ဗဟိုလက်ယာယိမ်း လွှတ်တော်အမတ် ဒန်နီယယ်ဘက်ကွယ်လိန်း က " လူမြင်ကွင်းလမ်းတွေပေါ်မှာ တစ်
စုံတစ်ဦးရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို သိရှိမှတ်မိစေနိုင်ဖို့ က အများပြည်သူအတွက်ရပ်ရွာအေးချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး
ကမရှိမဖြစ်ပိုအရေးကြီးပါတယ်...ပြီးတော့ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်လည်းမေးခွန်းထုတ်
စရာ ( ညှိုးမှိန်သေးသိမ်စရာ ) ဖြစ်ပါတယ်....မျက်နှာတစ်ခုလုံးဖုံးပြီးနေရတဲ့ အမျိူးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမ
အတွက်တော့ လမ်းလျှောက်နေရတဲ့ အကျဉ်းထောင် ( ရှင်လျှက်နဲ့ ထောင်ကျနေသလို ) ပါပဲ ..." လို့ 
လွန်ခဲ့ တဲ့ညကပြောကြားခဲ့ ပါသည်...
အဆိုပါ သမိုင်းဝင်ဥပဒေပြဌာန်းခြင်းဟာ ယခင်အစောပိုင်းဆယ်ရက်ခန့် က ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရဲ့ ဝန်ကြီး
ချူပ် Yves Leterme နှုတ်ထွက်ခဲ့ ပြီး ပါလီမန် ( အစိုးရလည်း ) ပြိုကွဲခဲ့ ရလို့ ထိုမျက်နှာဖုံးတားဆီးရေး
ဥပဒေကို မဲပေးအတည်ပြုဖို့ နှောင့် နှေးခဲ့ ရပြီးနောက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါသည်...
နိုင်ငံရေးအရ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေချိန်အတွင်းမှာပင် လျော့ ရဲရဲဖွဲ့ စည်းထားသည့် ငါးပါတီ မဟာမိတ်အဖွဲ့ မှလွှတ်
တော်အမတ်များက အဆိုပါအငြင်းပွားဖွယ်ရာဥပဒေကို ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက အတင်းအကြပ်တိုက်တွန်း
ဒီလိုဝတ်ပြီးအပြင်သွားခဲ့ ယင် ထောင်ဒါဏ် ၇ ရက် ကျခံနိုင်ပါတယ်...
အဆိုပါဥပဒေအရ မည်သူမဆို ဆေးရုံများ၊ ကျောင်းများ၊ ရုံးများ၊ ဆိုင်များ၊ လမ်းများတွင် ( ဦးခေါင်းမှခြေ
ဖျားအထိ ) မျက်နှာကိုဖုံးပြီး သွားလာနေထိုင်ခြင်းကို တားမြစ်နိုင်လိမ့် မည်ဖြစ်ပါသည်...
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျူးလွန်သူအမျိူးသမီးများကို ဒါဏ်ငွေ ၁၆၅ ဒေါ်လာ ချမှတ်ပေးဆောင်စေမည်ဖြစ်ပြီး
ဒါဏ်ငွေပေးဆောင်ရန်ငြင်းဆိုခဲ့ လျှင် သို့ မဟုတ် ဒုတိယအကြိမ် ကျိူးလွန်လျှင်ရက်သတ္တတစ်ပါတ်အထိ
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိ ၂ သိန်း ၈ သောင်းအရေအတွက်မျှရှိသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များတွင် ၄ ထောင်
သို့ မဟုတ် ၄ သောင်း ( မူရင်းသတင်းတွင် ၄ ရာဟု ဆိုထားသည်၊ မဖြစ်နိုင်ပါ...) ခန့် မျှသောအမျိူးသမီး
များက အပြင်ထွက်တိုင်း မျက်နှာဖုံးထားသည့် burka ၀တ်စုံ ၀တ်ဆင်ပြီးထွက်လေ့ ရှိသည်ဟုခန့် မှန်းကြ
အခြားသောဥရောပနိုင်ငံများကလည်းထိုကဲ့ သို့ တားမြစ်သည့် ဥပေဒများ ပြဌာန်းနိုင်ရန်စဉ်းစားဆွေးနွေး
နေစဉ် ဘယ်လ်ဂျီယံတွင် ယခုကဲ့ သို့ ဥပဒေမူကြမ်းအတည်ပြုချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်...
နယ်သာလင် ( ဒတ်ခ်ျ ) နိုင်ငံတွင်လည်း အမျိူးသမီးများ မျက်လုံးသာမြင်သာယုံလှစ်ပြထားပြီး ဦးခေါင်း
အပါဝင် မျက်နှာပါဖုံးထားရသော burka သို့ မဟုတ် niqab ၀တ်စုံများဝတ်ဆင်ပြီး သွားလာခြင်းကိုတား
မြစ်ရန် နိုင်ငံအများအပြားကထောက်ခံအားပေးခဲ့ ကြပါသည်...
မကြာသေးခင်ကပင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် လခြမ်းပုံအထွတ်ပါသည့် မွတ်ဆလင်ဗလီများဆောက်လုပ်
ခြင်းကိုမဲပေးတားမြစ်ခဲ့ ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံကလည်း ယခုလိုဦးခေါင်းဖုံးပြီးဝတ်ဆင်သွားလာခြင်းကိုတားမြစ်
မည့် ဥပေဒကို လာမည့် ဂျူလိုင်လတွင် မဲပေးဆုံးဖြတ်ရန်ပြင်ဆင်နေပါသည်...
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်အတည်ပြုမည့် ဥပဒေများအရ ၎င်းတို့ ၏မျက်နှာများကို ဖုံးအုပ်ကွယ်ဝှက်ထားသည့်အ
မျိူးသမီးများကို ဒေါ်လာ ၉၀၀ အထိဒါဏ်ရိုက်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို သိရှိ
မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် ရဲစခန်းများတွင် မျက်နှာဖုံးများဖယ်ရှားစေမည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်...
မိမိတို့ ၏ဇနီးမယားများအား အတင်းအကြပ် မျက်နှာဖုံးကာဝတ်စုံများဝတ်ဆင်စေသည့် ခင်ပွန်းယောကျာင်္း
ပြင်သစ်နိုင်ငံအာဏာရ UMP ပါတီဥက္ကဌ Jean Francois Cope က " မျက်နှာဖုံးဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ခြင်း
ကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်မည့် ဥပဒေကိုလာမည့် စက်တင်ဘာ လလယ်လောက်တွင်ပြဌာန်းနိုင်လိမ့် မည်ဟု ၀န်
ကြီးချူပ်က ကျွန်တော်တို့ ကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...မကြာခင်ကပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ စစ်တမ်းအရ ပြင်သစ်ပြည်
သူလူထု ၇၀ ရာခိုင်နှုံးက အများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာ မျက်နှာဖုံးပြီးသွားလာနေထိုင်ခြင်းကို ဆန့် ကျင်ကန့် 
ကွက်ခဲ့ ကြပါတယ်..." ယခုသီတင်းပါတ်အတွင်းပြောကြားခဲ့ ပါသည်...
နိုင်ငံအနှံ့ အပြားထိုကိစ္စကိုအားပေးထောက်ခံလင့် ကစား ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏အမြင့် ဆုံးတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ 
ဖြစ်သည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီကမူ မည်သည့် ဥပဒေမျိူးမဆို ဥရောပသမဂ္ဂ၏ လူ့ အခွင့် အရေး
ဆိုင်ရာတရားဥပဒေများဖြင့် တားဆီးပယ်ဖျက်နိုင်သည်ဟု သတိပေးထားခဲ့ ပါသည်...
ယခုပြဌာန်းခဲ့ သောဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံမှ ဥပဒေသည်လည်း အဆိုပါ ( ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အခြေခံလူ့ အခွင့် 
အရေး ) ဥပဒေဖြင့် ပင်ပြန်လည်ပယ်ဖျက်ရန် စိန်ခေါ်နိုင်ပါသေးသည်...
လူသားတွေရဲ့ ဘ၀လုံခြုံစိတ်ချရေးနှင့် လွတ်လပ်စာပြောဆိုနိုင်ခွင့် ၊ ၀တ်ဆင်နေထိုင်နိုင်ခွင့် ဆိုတဲ့ အခြေ
ခံလူ့ အခွင့် အရေးမူ တွေဟာ မသမာသူအနည်းစုကြောင့် ထိခိုက်ခံရမှာတော့ အသေအချာပါပဲ...
(တစ်ချိူ့ သောအကြမ်းဖက်သမားများက ထိုမျက်နှာဖုံးဝတ်စုံများဖြင့် အကာအကွယ်ယူကာ အသေခံဗုံး
ခွဲခြင်း၊ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်းများပြုလုပ်ကြလို့ အခုလို တားဆီးပိတ်ပင်တာတွေပေါ်ပေါက်လာရတာ
ယခုတားမြစ်ချက်ကိုပဲ ၎င်းတို့ ဘာသာကိုစော်ကားပါတယ်ဆိုပြီး ဘာသာရေးအစွန်းရောက်များက ပြော
ဆိုစည်းရုံးကာ အဆိုပါနိုင်ငံများမှာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်...
ကမ္ဘာကြီးကတော့ ဘယ်နေရာမှ လုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆိုတာမရှိတော့ ပါဘူး...
Posted by peter kyaw | at 1:31 AM |2comments
ကွယ်လွန်သွားခဲ့ ပြီဖြစ်တဲ့ သူများအနေနဲ့ လူတွေကို စကားတွေ၊ပုံပြင်တွေပြန်ပြောနိုင်တော့ မှာမဟုတ်
ပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့ အတွက်တော့ မဲတွေရနိုင်ပါသေးတယ်...
လွန်ခဲ့ တဲ့မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ က ထရေစီ မြို့ မှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ သွားခဲ့ တဲ့ ကားလ်ရော်
ဘင်ဂီယာရီဟာ မြို့ တော်ဝန်အဖြစ်အရွေးခံခဲ့ ရပါတယ်...
ကွယ်လွန်သူ မစ္စတာဂီယာရီ ဟာလက်ရှိမြို့ တော်ဝန် ဘာဘရာဘရော့ ခ် ကို ၂၆၈ မဲ ၈၅ မဲ နဲ့ လွန်ခဲ့ 
တဲ့ အင်္ဂါနေ့ ကအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ ကြောင်း ဂရန်ဒီ နယ်မြေရွေးကောက်ပွဲရေးကော်မရှင်ကြီးကြပ်
ရေးမှူး ဒိုနာဘာရှမ် ရဲ့ အဆိုအရသိရပါတယ်...
" သူသေဆုံးသွားခဲ့ ပြီဆိုတာကိုလည်း သိပါတယ်..သေပြီးသူကိုမြို့ တော်ဝန်အဖြစ်ဆန္ဒမဲပေးတာဟာ
လည်းမိုက်မဲမှုသက်သက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း သိပါတယ်...ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ က လက်ရှိ
မြို့ တော်ဝန်အမျိူးသမီးကို မလိုလားတော့ တာပါ...သူမကလွဲယင်တစ်ခြားတစ်ယောက်ကိုပဲဖြစ်စေချင်
ပါတယ်....အကယ်၍သူ့ ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြိုင်စေဦးမယ်ဆိုလည်း ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ ကိုပဲ
မဲပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ မြို့ ကလေးရဲ့ lunch box စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဆိုပါတယ်...
ကွယ်လွန်သူရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူကတော့ " သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အခုလိုရွေးချယ်ခံရခြင်းဟာ သိပ်မထူးဆန်း
တော့ ပါကြောင်း၊ သူသေဆုံးတဲ့ နေ့ က လူတွေဟာပူဆွေးဝမ်းနည်းကြပြီး ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ခင်
ဗျားကိုပဲ မဲပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ ကြကြောင်း..." ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ယခုတော့ ရွေးချယ်ခံရသူလည်းကွယ်လွန်ခဲ့ ပြီးပြီမို့ ထိုရာထူးကို လစ်လပ်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေငြာမှာဖြစ်ပြီး မြို့ မိမြို့ ဖ ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးက မြို့ တော်ဝန်အသစ်ကို ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
ကြီးကြပ်ရေးမှူး မစ္စဘာရှမ် ကဆိုပါတယ်...
တင်နက်ဆီပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးအုပ်ချူပ်ရေးရုံးမှ ၀န်ထမ်းများကတော့ ယခုလိုသေဆုံးသွားပြီးသူ
တစ်ဦးရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ တယ်ဆိုတာ ၎င်းတို့ အနေဖြင့် တစ်ခါမှမကြားဖူးကြောင်းဝန်ခံပြောဆို
လက်ရှိအာဏာရ မြို့ တော်ဝန်အနေနဲ့ အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး မဲခိုး၊မဲလိမ်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ လိမ်ညာမဲဆွယ်ခြင်းတွေ မလုပ်ခဲ့ တာနဲ့ အတူ အတူ ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့် ခဲ့တာကို ၀န်ခံခဲ့ တာကို
လည်း အသိအမှတ်ပြု ရပါမယ်...
သူမသာ မမှန်မကန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ ယင်လည်းအခြေအနေက တစ်မျိူးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်...
နို့ မို့ ဆိုယင် သိတယ်မဟုတ်လား...
အဲဒီလိုမျိူးအဖြစ်အပျက်တွေဖတ်ဖူးလို့ တွေးကြည့် ၊ပြောကြည့်တာပါ...
On Tuesday, the late Mr. Geary defeated incumbent Barbara Brock by 268 votes to 85, according to Grundy County Administrator of Elections Donna Basham.
His widow, Susan Geary, said his election "was notasurprise at all to me. The day he passed away, people were calling with condolences and saying, 'We're still voting for him,'" she said.
Ms. Basham said the seat would be declared vacant and the city's four aldermen would selectanew mayor. Staff members at the Tennessee Secretary of State's Office said they've never heard ofadead person winning an election.
Posted by peter kyaw | at 11:04 AM |0comments
Labels: news: timesfreepress.com
ကြက်ဥပုပ် မိုးရွာလို့ ထီးဆောင်းနေရတဲ့ ပါလီမန်သဘာပတိကြီး....
ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့ တော်ကီးယက်ဗ် တွင်ပြည်သူအများစုရုံးဆန္ဒပြနေစဉ်အတွင်း နိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်အတွင်း
တွင်လည်း ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ အပြင်းအထန်ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ပြီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ကာ၊ ထိုး
ကြိတ်တိုက်ခိုက်ကြသဖြင့် မီးခိုးဗုံးများပစ်သွင်းပြီးအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ ရပါတယ်...
ဆရာ့ အစားတပည့် ခံ...
မကြာခင်က ရုရှားနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ရေတပ်စခန်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကို သဘောမတူ၊ စိတ်ဆိုးဒေါ
သထွက်နေခဲ့ တဲ့ လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာ မြို့ တော်ရဲ့ လမ်းများကို ၀င်ရောက်စီးနင်းပိတ်ဆို့ ကာ ယူ
ကရိန်းပါလီမန် Verkhovna Rada အဆောက်အဦးပတ်ပတ်လည်မှာ တဲများထိုးပြီး ဆန္ဒပြနေကြတယ်
ထိုသို့ အငြင်းပွားဖွယ်သဘောတူညီချက်ကိုပါလီမန်တွင် အတည်ပြုရန်ဆွေးနွေးနေစဉ်အတွင်း အမည်မ
သိသူတစ်ဦးက ပါလီမန်သဘာပတိ အားကြက်ဥဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့ ပြီးနောက်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့
အဆိုပါကြက်ဥဖြင့်တိုက်ခိုက်ကန့် ကွက်မှုကြောင့် အပြင်မီးလောင်ဗုံးနှစ်လုံးပစ်သွင်းခဲ့ လို့ မီးခိုးတွေဖုံး
မလာခင် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ Volodymr Lytvyn ခမျာ ထီးနှစ်ချောင်းဖြင့် အုပ်မိုးအကာအကွယ်ယူခဲ့ ရရှာ
လွှတ်တော်အမတ်မင်းများရဲ့ စည်းကမ်းရှိရှိ၊ လေးစားဖွယ် အစည်းအဝေး...
ပါလီမန်အတွင်းတပ်ဆင်ထားတဲ့ ကင်မရာများကရိုက်ခဲ့ တဲ့ မှတ်တမ်းများအရ မီးခိုးငွေ့ တွေဖုံးလွှမ်းလာ
နေစဉ်မှာပဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ထိုးကြ၊ကြိတ်ကြ၊တွန်းတိုးကြ၊ တစ်ဦး
ဆံပင်တစ်ဦးစောင့် ဆွဲနေကြတာတွေ့ မြင်ရပါတယ်...
အတိုက်အခံအမတ်များကတော့ ယူကရိန်းအမျိူးသားအလံကို ဖြန့် ကျက်ပြီးဆန္ဒပြကြတယ်...
ထူးခြားစွာပဲ မကြာခဏငြင်းခုံ၊ ရန်ဖြစ်တတ်တဲ့ ပါလီမန်ဆွေးနွေးပွဲကို စည်းကမ်းတစ်ကျဖြစ်အောင် ပြန်
လည်ထိမ်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ ပါတယ်....သို့ သော်လည်း မကြေမနပ်ဆက်လက်အော်ဟစ်ဆွေးနွေးနေသံတွေ
ကိုတော့ ကြားနေခဲ့ ရပါတယ်...
အများမကြိုက်တဲ့ ဥပဒေမှန်သမျှ ကြက်ဥပုပ်နဲ့ ပစ်ပေါက်...ထိုးကြိတ်ပြီးဆန့် ကျင်ကြ...
ငါးစိမ်းတန်းနဲ့ လွှတ်တော် နေရာများမှားနေခဲ့ သလား...
ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ ဆိပ်ကမ်းကို ရုရှားရေတပ်ကို ၂၀၄၂ အထိဆက်လက်အသုံးပြုခွင့် ပေး
လိုက်လို့ ဆန့် ကျင်ကန့် ကွက်နေကြတာပါ...
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ သူတွေအဖို့ တော့ ဒီလိုပဲ စိတ်လိုက်မာန်ပါ တုံ့ ပြန်တတ်တာ
ကတော့ လူ့ သဘာဝပါပဲ...
ဒီလိုမျိူးလွှတ်တော်တွင်း ထိုးပွဲကြိတ်ပွဲဆွဲငင်တွန်းထိုးပွဲတွေကို ထိုင်ဝမ်လွှတ်တော်၊ ကိုရီးယားလွှတ်တော်
တို့ ၊ အိန္ဒိယလွှတ်တော်တို့ မှာ ယခင်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ ဖူးပါတယ်...
ရွှေပြည်ကြီးရဲ့ အနာဂတ်လွှတ်တော်ကြီးလည်း ဘယ်လိုပုံဘယ်လိုနည်းနဲ့ ချီတက်လေမလည်းဆိုတာ
မကြာမှီ လာမည် ....မျှော် ပေါ့ ဗျာ...
အဲဒီလိုမျိူးရုန်းရင်းဆန်ခတ်မဖြစ်အောင် သေနတ်ခါးထိုးထားတဲ့ သူတွေ အစိတ်သားထည့် ထားတာဖြစ်နိုင်
Posted by peter kyaw | at 5:30 AM |4comments
Labels: news.sky.com, photos:daily mail
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ရှိ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာမလေး...
ဘ၀နာခဲ့ သူလေးရဲ့ စေတနာ....
ဘာတီကုမာရီလေးဟာ မွေးကင်းစအရွယ်မှာပင် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘီဟာ
ပြည်နယ်က မီးရထားဘူတာရုံတစ်ခုမှာ စွန့် ပစ်ထားခြင်းခံခဲ့ ရပါတယ်...
ယခု သူမအသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူမကိုကောက်ယူမွေးစားခဲ့ တဲ့ ကူဆန်ဘာရ
ရွာကလေးက ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဖြစ်နေပါပြီ...
နေ့ စဉ်နေ့ တိုင်း နံနက်ခင်းနဲ့ ညနေခင်းတွေမှာ သူမဟာ ကျောင်းဝန်းက သရက်ပင်ရိပ်အောက်မှာ ရွာထဲ
က ကလေးအယောက် ၅၀ ကို ဟင်ဒီဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ နှင့် သချာင်္ ဘာသာတွေကို သင်ကြားပြသပေး
ထိုသို့ သူမ သာမသင်ပေးလျှင် ကလေးတွေအနေနဲ့ စာတတ်မှာ မဟုတ်တော့ ပါဘူး...
ထိုစာသင်ပေးချိန်ကြားထဲက အားလပ်ချိန်မှာတော့ သူမဟာ ရွာကနေ နှစ်မိုင်ဝေးတဲ့ အခိုဒီဂိုလာ ဆိုတဲ့ ရွာ
က အစိုးရကျောင်းမှာ သူမကိုယ်တိုင်ကျောင်းသွားတက်ပြီး စာသင်ကြားရပါသေးတယ်...
သူမရဲ့ ကျောင်းဝတ်စုံကို ဂုဏ်ယူဝံ့ ကြွားစွာဝတ်ဆင်ပြီး သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း၊ စာသင်ခန်းမှာ အသက်
၄ နှစ် ကနေ ၁၀ နှစ်အတွင်းရှိ ရွာက ကလေးတွေကို သူမသင်ယူခဲ့ ရတဲ့ အသိပညာတွေ ပြန်လည်ဝေငှ
" ကျွန်မအတွက်တော့ တစ်နေ့ လုံးကြာမြင့် စွာဟာသင်ကြားရတာပါပဲ...ကျွန်မတက်ရတဲ့ ကျောင်းက နံ
နက် ၁၀ နာရီကနေ ညနေ ၃ နာရီအထိမို့ စားတွေပြန်လေ့ လာမှတ်သားရတာလည်း အချိန်နောက်ကျမှ
ဒါပေမယ့် အခုလို စာသင်ယူ၊သင်ပေး ရတာကိုပဲ နှစ်သက်မိပါတယ်....ကလေးတွေကို အေ၊ဘီ၊စီ၊ဒီ နဲ့ 
ဟင်ဒီ စာလုံးတွေ သင်ပေးရတာကိုပျော်ပါတယ်..." လို့ သူမက ပြောပါတယ်...
သူမရဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ၎င်းတို့ ရဲ့ မိဘတွေက ဆင်းရဲလွန်းလို့ အလုပ်စေခိုင်းရန်သော်၎င်း၊ နေထိုင်ရာ
ရွာအနီးပါတ်ဝန်းကျင်မှာ စာသင်ကျောင်းမရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရပညာရေးစနစ်ပြင်ပ
မှာရှိနေတဲ့ ကလေး ၁၀ သန်း ထဲမှာအပါအ၀င်ဖြစ်နေပါတယ်...
ယခုလအစောပိုင်းကပဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ကလေးသူငယ်တိုင်းအခမဲ့ ပညာရေးရနိုင်မယ့် " အား
လုံးအတွက်ပညာသင်ကြားခွင့် " စီမံချက်အတွက် ဒေါ်လာ ၅.၄ ဘီလီယံ အကုန်အကျခံဖို့ ကတိပြုခဲ့ ပါ
ဘာတီကုမာရီ ရဲ့ မွေးစားဖခင်၊ ဆင်းရဲသားလယ်သူရင်းငှားဖြစ်သူ ရမ်ပတီ က " ၎င်းအနေနဲ့ ကျေးရွာများ
ရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးများကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ချပေးခြင်းကိုပြုလုပ်မှာမ
ဟုတ်ပဲ သူမကိုပညာဆက်လက်သင်ကြားခွင့် ပြုမှာ ဖြစ်တယ် .."လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်...
သူမရဲ့ အနာဂတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက်လည်း သူမအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီးခဲ့ ပါပြီ...
" ကျွန်မအရွယ်ရောက်လာယင် ကျောင်းဆရာမပဲ မဖြစ်မနေလုပ်ချင်ပါတယ်..." လို့ သူမကပြောကြားခဲ့ 
အများအားဖြင့် တော့ ဘ၀နာသူတွေဟာ ဆင်းရဲချိူ့ တဲ့ သူတွေကို ဂရုဏာတရားပိုမိုကြီးမားလေ့ ရှိပါ
Posted by peter kyaw | at 3:53 AM | 1 comments
Labels: news: timesonline.co.uk
Can it really be true thatbacrazed Iranian cleric is right?
ကမ္ဘာတစ်လွှားက အမျိူးသမီးတွေအနေနဲ့ ယနေ့ မှာ အီရန်နိုင်ငံက တရားဟောဆရာ Hojatoleslam
Kazem Segighi ရဲ့ အခိုင်အမာပြောဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ အမျိူးသမီးတွေရဲ့ မြင်သူတစ်ကာကြိုက်စေမယ့် လည်
ဟိုက် ၀တ်စုံများဝတ်ပြီး ပြသ၀တ်ဆင်မှုကြောင့် မြေငလျင်များဖြစ်ပွားရတယ်ဆိုတာကို မဟုတ်မှန်ကြောင်း
သက်သေပြဖို့ သူမတို့ အင်္ကျီတွေလှစ်ဟ ပြနေချိန်မှာပဲ ထိုင်ဝမ်နိုင်မှာ ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားခဲ့ ပါ
ကမ္ဘာကျော်အင်တာနက်စာမျက်နှာ facebook မှာစတင်စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်ခဲ့ တဲ့ အဆိုပါ ရင်သိမ့် တုန်ပြ
ပွဲဟာ အမျိူးသမီးပေါင်း ၂ သိန်းကျော်တို့ ရဲ့ ရင်ဝတ်လွှာဖြေလျော ပါဝင်ဆန္ဒပြဖို့ အားပေးထောက်ခံမှုရ
ရင်သိမ့် တုန် ပြပွဲကြီးစိတ်ကူးတည်ထောင်သူ ဂျင်နီဖာ မက်ခရိုက် တစ်ယောက်တော့ သူမရဲ့ အယူအဆ
တွေအတွက် အဖြေပေးဖို့ အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတွေရှိလာခဲ့ ရပါပြီ...
အမျိူးသမီးတွေ မိမိတို့ ရဲ့ ရွှေရင်အစုံတွေကို လုံခြုံစွာမ၀တ်ဆင်၊မဖုံးအုပ်ပဲဖွင့် ဟလှစ်ဖော်ဝတ်ဆင်ကြလို့ 
သဘာဝဘေးဒါဏ်၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်းများဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အီရန်နိုင်ငံက အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆရာတစ်
ဦးရဲ့ အဆိုကို မှားယွင်းကြောင်းသက်သေပြဖို့ ကမ္ဘာအနှံ့ အပြားက အမျိူးသမီးတွေ အနေနဲ့ မြင်သူတစ်
ကိုမြူဆွယ်ဖြားယောင်းစေနိုင်တဲ့ အမြင်ဖြစ်အောင် မလုံ့ တစ်လုံဝတ်ကာ ရွှေရင်အစုံသိမ့် သိမ့် တုန်အောင်
ပြသကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲနေ့ ဟာ သူမတို့ အတွက် စိတ်မကောင်းစာရာအဖြစ်အပျက်နဲ့ စတင်
ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီမှာတော့ အင်အား ၆.၉ မီဂ္ဂနီကျူဒ်ရှိတဲ့ ငလျင်တစ်ခုဟာ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ
မှာလှုပ်ခဲ့ ပါတယ်...( ဒါပေမယ့် လူအထိအခိုက်အသေအပျောက်မရှိခဲ့ ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်...)
အဆိုပါသတင်းကြောင့် ထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ ချီတဲ့ ရင်ကိုခွဲကာပြကြမယ့်ရွှေရင်အစုံသိမ့် သိမ့် တုန် မမ
တွေဟာ ( အစ်ကိုကာလသားများ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ပဲ...) ၎င်းတို့ ရဲ့ ရှေ့ ရေးကိုရင်လေးစွာနဲ့ ပဲ ပိတ်
ပင်ခဲ့ ကြတော့ မယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး...
ယခုဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ ငလျင်ဟာ သူမတို့ အစွမ်းကုန်ပြသကြမယ့် ဒေသရဲ့ အချိန်ဇုန်အပြင်မှာဖြစ်ခဲ့ တာလို့ သူ
မက ဆိုခဲ့ ပေမယ့် ထိုငလျင်ဟာ အသိအမှတ်ပြုလောက်ပါတယ်ဒါပေမယ့် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာဖြစ်
တယ် ( သူမတို့ ပြလို့ ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူး )လို့ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်၊ ပါဒျူး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ
မစ္စ မက်ခရိုက်ကသူမရဲ့ ဘလော့ ဂ်မှာရေးခဲ့ ပါတယ်...
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှအားဖြင့်၆ ကနေ့ ၆.၉ မဂ္ဂနီကျူဒ် ရှိတဲ့ မြေငလျင်ပေါင်း ၁၃၄ ခုလောက်( ကမ္ဘာအ၀ှမ်း )
လှုပ်လေ့ ရှိပါတယ်...အကယ်၍ နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း အခုလိုပြင်းအားရှိတဲ့ မြေငလျင်တွေ အများအ
ပြားလှုပ်မယ်ဆိုယင်တော့ ကျွန်မတို့ ဟာ အရှက်သိက္ခာမဲ့ စာဝတ်စားဆင်ယင်၊နေထိုင်ခြင်း ( ဖော်ကြ၊
ချွတ်ကြ လူတစ်ကာနဲ့ အိပ်ကြ ) တာတွေရဲ့ ကမ္ဘာမြေပေါ်အဖျက် စွမ်းအင်သက်ရောက်စေနိုင်တာကို အ
လေးထားစဉ်းစားရတော့ မှာဖြစ်ပါတယ် လို့ သူမကပြောခဲ့ ပါတယ်...
အမှန်တစ်ကယ်တော့ ဟောပြောသူရော၊ အရွဲ့ တိုက်ချင်သူပါ သတိမထားမိတဲ့ အချက်က ဘယ်သူတွေ
ဘယ်လောက်ကြီးပဲ ပြနေသည်ဖြစ်စေ၊ မပြပဲနေသည်ဖြစ်စေ ကမ္ဘာ့ မြေလွှာရွေ့ လျားမှုတွေ၊ မီးတောင်
ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့် ငလျင်တွေအချိန်နဲ့ အမျှ တစ်နေရာမဟုတ်တစ်နေရာတော့ လှုပ်နေတာပါပဲ...
အင်အားပြင်းထန်တာနဲ့ မပြင်းထန်တာ၊ လှုပ်တဲ့ အချိန်ကာလပဲမတူညီတာဖြစ်ပါတယ်...
ဗဟုသုတမရှိတဲ့ ရိုးသားတဲ့ သူတွေ တော့ပြောသမျှယုံကြရရှာတာပါပဲ...
မြေငလျင်ကြေတွေပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ အီရန်တို့ ဂျပန်တို့ ကတော့ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေထက်စာယင် ပိုပြီးင
ဒီသတင်းလေးတောင်းဆိုတဲ့ သူတွေဆန္ဒပြည့် ဝကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
A tremor, measuring 6.5 on the richter scale, came asaFacebook event called ‘Boobquake’ received support from 200,000 women vowing to bare their chests. Boobquake founder Jennifer McCreight may have some serious questions to answer.
Her day of action calling on the women of the world to dress scandalously and prove wrong an Iranian cleric who blames natural disasters on cleavage has started, well, disastrously. At 11am local time,a6.9 magnitude earthquake hit Taiwan, no doubt causing thousands of Boobquake fans to hastily button up.
Although she’s claiming it doesn’t count because it happened outside her Boobquake time zone, Ms McCreight admits on her blog that the wobble was significant, but not unusual. But the organiser, Jennifer McCreight,astudent at Purdue University, Indiana, today insisted the Taiwan quake does not count because it happened outside her time zone.
“On avg, 134 magnitude 6-6.9 earthquakes occur annually,” she said: “If we get many ofasimilar magnitude in the next 24 hours, we might start worshipping the power of immodesty.”
Posted by peter kyaw | at 3:34 PM |2comments
Labels: blog.news.com.au, news: daily mail
မွေးကာစ ၆ ပေါင်သာရှိတဲ့ အရွယ်အလွန်သေးငယ်တဲ့ မြင်းကလေး...
အလွန်သေးငယ်သည့် ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားရှိသည့် မြင်းထီးကလေးဟာ ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံးမြင်းငယ်
လေးအဖြစ် စံချိန်တင်နိုင်တော့ မှာဖြစ်ပါတယ်...
အသက် ၃ ရက်သာ ရှိသေးတဲ့အိုင်းစတိုင်းလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ မြင်းပေါက်ကလေးဟာ ၁၄ လက်မ
သာမြင့် ပြီး ၆ ပေါင်သာ အလေးချိန်ရှိပါတယ်...
အခုလိုအလွန်သေးငယ်တဲ့ မြင်းကလေးကို New Hampshire နယ်၊ Barnstead အရပ် Tiz Miniature
မြင်းမွေးမြူရေးခြံမှာ လွန်ခဲ့ တဲ့ သောကြာနေ့ က မွေးဖွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူ့ ရဲ့ မွေးစခန္ဓာကိုယ်အချိူးအစားအရ မွေးကင်းစကလေးငယ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့ ရပေမယ့် မြင်းတွေအတွက်
တော့အလွန်ကိုသေးငယ်တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်...အိုင်းစတိုင်းရဲ့ မိခင်မြင်းမလို အရွယ်အစားသိပ်မ
၁၄ လက်မ ပဲမြင့် ပါသတဲ့ ....
အိုင်းစတိုင်းကိုစပ်တူပိုင်တဲ့ ဒေါက်တာ ရေချယ်ဝဂ္ဂနာ ကတော့ ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံးမွေးကင်းစ မြင်းငယ်အ
ဖြစ် ၉ ပေါင်သာရှိတဲ့ မြင်းကလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..
လက်ရှိကမ္ဘာ့ အသေးဆုံးမြင်းပုစံချိန်တင်ထားတဲ့Thumbelina လိုတော့ အိုင်းစတိုင်းဟာ မြင်းပုဖြစ်မယ့် 
လက္ခဏာမပြဖူးလို့ မွေးမြူသူတွေကဆိုပါတယ်...သူဟာ မြင်းသေးကလေးတစ်ကောင်သာဖြစ်ပါတယ်
Posted by peter kyaw | at 6:27 AM | 1 comments
The jolly teen giant:
အမေရိကန်ရောက် ကမ္ဘာ့ အရပ်အရှည်ဆုံး ဂျမေကာကျောင်းသူလေး...
ဆရာထက် ပိုရှည်တဲ့ တပည့် ...
ဂျမေကာနိုင်ငံမှ အသက် ၁၆ နှစ်ရှိ မိန်းကလေး အရပ် ၆ပေ ၁၁ လက်မဖြင့် ကမ္ဘာ့ အရပ်အမြင့် ဆုံးဆယ်
သူမရဲ့ ဆရာဖြစ်သူနှင့် သူငယ်ချင်းများထက်ကို အရပ်ကြီးက စိုးမိုးနေပြီး အလွန်အံ့ အားသင့် စရာ အရပ်
အမြင့် ၆ ပေ၊ ၁၁ လက်မ နဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးဟာ ကမ္ဘာ့ အရပ်အမြင့် ဆုံးသမီးပျိူဖြစ်နေ
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ဂျမေကာ နိုင်ငံသူ Marvadene Anderson ကလေးဟာ သူရဲ့ ပြိုင်ဘက်ဘတ်
စကတ်ဘော ကစားသူ ကျောင်းသူတွေကို ကြောက်ရွံ့ စေတယ်ဆိုယင်တော့ အံ့ သြစရာသိပ်ဖြစ်မှာမ
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ထောက်ပံ့ ကြေးအစီအစဉ်နဲ့ ကျောင်းတက်နေတဲ့ မာဗဒင်း လေးဟာဘတ်စ
ကတ်ဘောကစားနည်းမှာ သူမရဲ့ စံပြအားကျသူ ဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ထက်တောင် အရပ် ငါးလက်မ
သူမရဲ့ အရပ်ကြီးနဲ့ ဆိုတော့ သိပ်ခုန်စရာတောင်မလို...
" မာဗဒင်း ကတော့ ကျောင်းရဲ့ ဘတ်စကတ်ဘောအသင်းအတွက် တစ်ကယ့် ကိုအံ့ သြစရာ အားဖြည့် 
မှုပါပဲ... တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေတောင် သူမရဲ့ အရပ်အမောင်းကြောင့် အံ့ အားသင့် သွားကြရသလို
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အလားတူဖြစ်ခဲ့ ရတယ်ဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ်...အခုတော့ သူမဟာ ကျွန်တော်
တို့ ကျောင်း ဘတ်စကတ်ဘောအသင်းအတွက် အစားထိုးလို့ မရတဲ့ သူဖြစ်နေပါပြီ..." လို့ နယူးဂျာဆီ
ပြည်နယ်၊ Rutger Preparatory ကျောင်းက အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ဆရာ JJ Quenault ကပြောဆို
"မကြာသေးခင်ကမှ netball ကစားနည်းကနေ ဘတ်စကတ်ဘော ကစားတာကိုပြောင်းကစားခဲ့ တဲ့ သူမ
ဟာ အမျိူးသမီးဘတ်စကတ်ဘောလောကမှာ ထွန်းတောက်လာမယ့် ကြယ်တစ်ပွင့် ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အနာ
ဂတ်ဟာလည်း ပိုမိုအောင်မြင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်..." လို့ ဆရာဖြစ်သူကပြော
နာမည်ကျော်ကြား၊ ဂုဏ်သတင်းကြီးတဲ့ ကျောင်းမှာ တက်ရောက်စာသင်ကြားနေတဲ့ သူမဟာ ဆရာ၊
ဆရာမများအပေါ်မှာ အရပ်ကြီးက မိုးထိုးနေပါတယ်...
" ကျွန်တော်က ကျောင်းရဲ့ ဓါတ်ပုံဆိုင်ရာဌာနမှာအလုပ် လုပ်တာမို့ မာဗဒင်း ရဲ့ ဓါတ်ပုံအချိူ့ ရိုက်ခဲ့ ရဖူး
ကိုယ်အလေးချိန် ၉၅ ကီလိုနဲ့ ရှူးဆိုဒ် ၁၁ စီးရတယ် ဆိုပဲ...
သူမရဲ့ ညီမကလည်း ၆ပေနဲ့ ၎ လက်မ ရှည်သတဲ့ ...
သူမရဲ့ အတိုင်းပိုင်ဆရာ ပီတာရစ်ချတ်ဆနန် ထက် သူမကပိုပြီးအရပ်ရှည်ကာဘေးချင်းယှဉ်ရပ်နေတာ
တွေ့ ရတာကိုက ရယ်ချင်စရာပါပဲ...သူက ၆ ပေနဲ့ ၈ လက်မ ရှိပြီး၊ သူမက ခြောက်ပေနဲ့ ၁၁ လက်မ နဲ့ 
ကမ္ဘာ့ အရပ်အမြင့် ဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်နေတာပါပဲ..." လို့ မစ္စာ ကွီနော့ကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ၆ ပေ ၁၀ နှင့် အရပ်အမြင့် ဆုံးဘွဲ့ ကိုရရှိထားတဲ့မာလီးဒွမ်ဒီး ဆီကနေထိုဘွဲ့ ထူးကို ရယူ
ခဲ့ တဲ့ မာဗဒင်း ဟာ အမေရိကန်ရုပ်သံလွှင့် အစီအစဉ်တစ်ခုရဲ့ အရပ်မြင့် မြင့် လူငယ်များကဏ္ဍမှာပါဝင်ခဲ့ 
ပြီးကတည်းက အများသူငါရှေ့ နဲ့ ရုပ်သံ၊စာနယ်ဇင်းများမှာ ပါဝင်ဖို့ ရှက်ရွံ့ နေခဲ့ ပါတယ်...
" လူတွေကတော့ ကျွန်မရဲ့ အရပ်အမောင်းနဲ့ ကိုယ်နေဟန်၊ စိတ်ထားတို့ ကြောင့် ခင်ခင်မင်မင်ရှိကြပါ
တယ်...ဒါပေမယ့် ဒီလိုအရပ်ကြီးရှည်နေတာကိုပဲ နည်းနည်းတော့ စိတ်ရှုပ်ပါတယ်...
ကျွန်မအတွက်အဆိုးဝါးဆုံး လူတွေရဲ့ ပြောဆိုဝေဖန်တာကတော့ ဒီလိုအရပ်ကြီးနဲ့ ခင်ပွန်းတစ်ယောက်
ဘယ်လိုမှ ရှာလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး လို့ ဆိုတာပါပဲ..." လို့ သူမက အမေရိကန် သတင်းစာတစ်စောင်နဲ့ တွေ့ 
ဆုံးမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာ မကြာခင်ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
Joking Jamaican basketball ace Bubbles, 16, is world's tallest teenage girl at 6ft 11in
‘Marvadene is wonderful addition to the school and the basketball team here,’ said JJ Quenault, 42,ateacher at Rutgers Preparatory School in New Jersey. ‘The other girls were stunned by her height when they first met her and I must admit so was I, but now she is almost irreplaceable in the team.
She is going to beastar in the world of girls basketball and even though she has only recently adapted to basketball from netball, we expectabig future from her.’
Attending classes at the prestigious school, Marvadene is used to towering over her teachers. ‘I work in the school photographic department and so have takenafew pictures of Marvadene,’ said Mr Quenault.
Having taken the title from Thai national Malee Duangdee who stands at 6ft 10in, Marvedene has become media shy since her appearance in an American television program about tall children.‘People are friendly with me because of my height and my personality. If I was tall and mean, I think I'd haveaproblem,’ she said in an interview with an American paper recently.
Posted by peter kyaw | at 4:47 AM |0comments
Police ban men with enlarged genitals
သတိ !!! သင့် ကို ပါပူဝါ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကအလိုမရှိပါ....
မိတ်ဆွေဘော်ဘော်များအတွက် အထူးရည်ရွယ်ရေးပြီးတင်တာမို့ လေဒီများတော့ ကျော်ဖတ်စေချင်ပါ
ခက်ဖွယ်ရယ်ကြုံ...ရှက်စဖွယ်ဓလေ့ မျိူးရယ်ကြောင့် ...
သင်၏ချစ်ညီဘွားကို မောင်တုတ်ကြီးဖြစ်အောင်ပြုပြင်စီရင်ခဲ့ မိလျှင်ဖြင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ပါပူဝါကျွန်း
၏ရဲတပ်ဖွဲ့ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် မမျှော်လင့် ပါနှင့် တော့ မိတ်ဆွေ...
သင့် ကိုပြည်သူ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကအလိုရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ပါပူဝါ ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲက ပြောဆိုပါသည်...
ရဲတပ်ဖွဲ့ သို့ ဝင်ရောက်လိုကြောင်းလျှောက်ထားသူကို သူ၏အဓိက အဂါင်္အစိတ်အပိုင်းအား ကြီးမားထွား
ကျိူင်းအောင် ပြုပြင်၊စီရင် ထား၊မထား မေးမြန်းစုံစမ်းရလိမ့် မည်ဟု ပါပူဝါရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ Bekto
Suprapto က ဆိုပါသည်...
အကယ်၍ပြုလုပ်ခဲ့ တယ်ဆိုယင်တော့ ထိုသူဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့ သို့ မဟုတ် စစ်တပ် မှာအမှုထမ်းဖို့ မသင့် တော်
ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဟု သူကဆက်ပြောခဲ့ ပါသည်...
သဘာဝလွန်အရွယ်အစားများကြောင့် သင်တန်းကာလများမှာ အခက်အခဲများဖြစ်ခဲ့ ရတာမို့ ယခုလိုတား
မြစ်ပိတ်ပင်တဲ့ မူဝါဒကိုချမှတ်အသုံးပြုခဲ့ ရတာဖြစ်တယ် လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောခွင့် ရပုဂ္ဂိုလ် Zainuri Lubis က
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့ တော် ဂျာကာတာမှာပြောခဲ့ ပါသည်...
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ ဖက်အစွန်ဆုံးဒေသက ဝေးခံခေါင်သီတဲ့ ပြည်နယ်ဟာ ပါပူဝါ လူမျိူးစုတွေနေ
ထိုင်ရာအရပ်ဖြစ်ပြီး ထိုဒေသကအမျိူးသားတွေဟာ အရှက်လုံဖို့ အကွာအကွယ်အဖြစ် သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်
ညီဘွားလေးများကို ဘူးသီးခြောက်များစွပ်ထားတတ်ကြလို့ ကျော်ကြားထင်ရှားပါသည်...
ပါပူဝါကျွန်းသားများဟာ ၎င်းတို့ ရဲ့ ဖွားဖက်တော်များကို ကြီးမားစေရန် ရိုးရာနည်းလမ်းများအသုံးပြုလေ့ ရှိ
တယ်လို့ ထိုဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးရဲ့ အဆိုအရသိရပါသည်...
၎င်းတို့ ဟာ gatal-gatal လို့ ခေါ်တဲ့ ( ယားယံစေတတ်တဲ့ ) အပင်ရဲ့ အရွက်များနဲ့ သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်
ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးရစ်ပတ်ထားလေ့ ရှိပြီး ထိုသစ်ရွက်များရဲ့ အစွမ်းက ပျားတုတ်သလို ယောင်ကိုင်း
ကြီးမားစေပါတယ် လို့အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူ ကပြောကြားခဲ့ ပါသည်....
တစ်ကျောင်း၊တစ်ဂါထာ၊ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်း ဆိုသလိုပေါ့ ဗျာ...
အမေရိကားနဲ့ ဥရောပသွားမယ့် ဆရာများ၊ ပါပူဝါမှာ တစ်ထောက်နားကြပါကုန်....
ရွှေပြည်ကြီးမှာတော့ သူတို့ ရဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသကို မောင်းကလေးနဲ့ ကာထားတတ်တဲ့ လူမျိူး
ရှိခဲ့ ပါတယ်...အခုတော့ အဲဒီဓလေ့ ဆက်ရှိသေးလားမသေချာတော့ ပါ...( နာဂ လူမျိူးတစ်မျိူးဖြစ်ပါ
ရိုက်တာ သတင်းဌာနက သတင်းမို့ အမှန်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
Forget about gettingajob asapolice officer in Indonesia's Papua if you have had your penis enlarged.
You won't get it, according to the Papua police chief.
An applicant "will be asked whether or not his vital organ has been enlarged," said Papua police
chief Bekto Suprapto said. "If he has, he will be considered unfit to join the police or the military."
The ban was applied since the unnatural size causes "hindrance during training," said police
spokesman Zainuri Lubis in Jakarta. Indonesia's remote easternmost province is home to
Papuan tribes, many of whom are known for wearing penis gourds.
Papuans usealocal technique to achieve the enlargement, according toasexologist,
wrapping the penis with leaves from the "gatal-gatal" (itchy) tree so that it swells up
"like it has been stung byabee," the expert said.
Posted by peter kyaw | at 12:50 AM |2comments
People Who Grow Real Horns
အများနဲ့ မတူ ချိူ ( ဂျိူ ) ပေါက်တဲ့ သူတွေ...
တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတွေဟာ ဦးချိူလို အသားဖု တွေထွက်လာတတ်ကြပါတယ်...
အဲဒီအဖုတွေဟာ တစ်ကယ်တော့ အရေပြားပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ ဦးချိူပုံ အဖုတွေပါ...အရေပြားရောဂါတစ်မျိူး
ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
အခုလိုဦးချိူပေါက်တဲ့ သူတွေဟာ အများအားဖြင့် အသက် ၅၅ နှစ်ကနေ ၆၅ နှစ်အတွင်းရှိတဲ့ သူတွေ
အခုသက်ရှိထင်ရှားဦးခေါင်းမှာ ဦးချိူပေါက်နေတဲ့ သူတွေ ( အဖိုး၊ အဖွားများ ) ရဲ့ ပုံတွေပါပဲ...
အသက် ၁၀၁ နှစ်ရှိ ဖွားဖွား...
ဒီအဖွားရဲ့ ဦးချိူကတော့တော်တော်ရှည်ပါတယ်...
ဒီအဖိုးရဲ့ ဦးချိူလည်း ကြီးမားလှပါတယ်...
ဒါလည်း တရုတ်က ဖွားဖွားဖြစ်ပါလိမ့် မယ်...
အသွင်တစ်မျိူးနဲ့ နောက်စေ့ မှာပေါက်တဲ့ ဦးချိူ
သူလည်း တရုတ်ပြည်ကြီးကပဲလို့ ထင်ပါတယ်...
ယခင်ကလည်းဒီအကြောင်းနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တင်ခဲ့ ပါသေးတယ်...
ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ....
Posted by peter kyaw | at 1:19 AM |0comments
ဆရာကြီးမှားကြောင်းပြကြမယ့် ရွှေရင်အစုံ သိမ့် သိမ့် တုန် ပွဲကြီး....
အနောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းမ၀တ်နဲ့ ...
သူမတို့ ရဲ့ ရွှေရင်အစုံ ကြောင့် မြေငလျင်မတုန်လှုပ်ရပါကြောင်း သက်သေပြဖို့ ကျိူးစားနေတဲ့ အမျိူးသမီး
တစ်ဦးရဲ့ စိတ်ကူးစီမံချက်ဟာ ပထမဦးဆုံးသော အမျိူးသမီးများရဲ့ ရင်ဝတ်တန်ဆာလှစ်ဟာ ပြကြမည့် 
" ရင်သိမ့် တုန် " စုရုံးပြသပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့ အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ရှားမှု
အီရန်နိုင်ငံမှ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆရာ Hojatoleslam Kazem Sedighi က မလုံ့ တလုံဝတ်ဆင်ထား
ပြီး ခဏတာအပျော်သဘောနဲ့ အမျိူးသားများနှင့် ချစ်ပွဲဝင်လေ့ ရှိတဲ့ အမျိူးသမီးများကြောင့် မြေငလျင်များ
လှုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ တာကြောင့် ကမ္ဘာအ၀ှမ်းက အမျိူးသမီးရေးရာအဖွဲ့ အစည်းများကို
စိတ်ဆိုး၊ ဒေါသထွက်စေခဲ့ ပါတယ်...( ရွှေပြည်ကြီးက အမျိူးသမီးရေးရာအဖွဲ့ ကြီးရောပါမလားမသိ...အ
ခုတော့ ရွှေပြည်က မမ တွေလည်း တော်တော်ပြနေကြပြီလို့ ဆိုကြပါတယ်...)
" အမျိူးသမီးတော်တော်များများကတော့ အိနြေ္ဒသိက္ခာရှိစွာနဲ့ မ၀တ်ဆင်ကြတော့ ပါဘူး...အဲဒီလိုဖော်ကြ
ပြကြလို့ လည်း ငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိူးသားတွေဟာ ခြေလှမ်းတွေပျက်ပြီး အိမ်ထောင်မပြုခင်လိင်ဆက်ဆံ
ကြကာ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေကိုဖြစ်စေကာ ကမ္ဘာ့ ငလျင်လှုပ်မှုတွေကို တိုးပွားစေခဲ့ တာဖြစ်
ပါတယ်..." လို့ Sedighi က ဟောပြောခဲ့ ပါတယ်...
" အဲဒီလိုငလျင်တွေလှုပ်လို့ အဆောက်အဦတွေပြိုကျပြီး အရှင်လတ်လတ်မြေမြုပ်ခံရမယ့် အရေးမှလွတ်
မြောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ...? " လို့ သောကြာနေ့ မှာပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ဗလီဝတ်ပြုပွဲမှာ သူကပြော
" (အစ္စလာမ်) ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမကိုခံယူပြီး အစ္စလာမ်ကျင့် ဝတ်သီလနှင့် အညီကျင့် ကြံနေထိုင်
ခြင်းဆိုတဲ့ အချက်ကလွဲလို့ တစ်ခြားဘယ်နည်းနှင့် မှဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး..." လို့ သူကပြောဆိုမိန့် 
Jennifer McCreight အမည်ရှိအမျိူးသမီးကတော့ သူ့ ရဲ့ အဆိုကိုမှားယွင်းကြောင်းသက်သပြဖို့ အခိုင်
အမာဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါတယ်...လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ရက်ကတည်းက သူမရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ " ရွှေရင်အစုံ
ကြောင့် သိမ့် သိမ့် တုန် " စေရမယ့် ဆိုတဲ့ လှုံ့ ဆော်မှုတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ ပြီး၊ လာမည့် ဧပြီလ ၂၆ ရက်
တနင်္လာနေ့ မှာ ပြုလုပ်ကြမယ့်" တတ်နိုင်သမျှပြလိုက်ကြ" ဆိုတဲ့ ပျိူမေတို့ ရဲ့ ၇င်ဖွင့် ထုတ်ဖော်ပြသ
ပွဲမှာ သူမနှင့်အတူပါဝင်ကြဖို့ အမျိူးသမီးပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော် ကစာရင်းပေးသွင်းထားခဲ့ ကြပြီးဖြစ်ပါ
အဲဒီနေ့ မှာ အကယ်၍ မီးတောင်တွေပေါက်ပြီးကမ္ဘာကြီးပြင်းထန်စွာမလှုပ်ခဲ့ ယင်တော့ Sedighi အနေနှင့်
သူဟောပြောခဲ့ တာတွေဟာ မှားယွင်းတယ်ဆိုတာ ၀န်ခံယုံမှတစ်ပါး ရွေးစရာလမ်းရှိတော့ မှာမဟုတ်
" လာမယ့် တနင်္လာနေ့ မှာတော့ ကျွန်မဟာ ရွှေရင်အစုံလှုပ်လို့ အခုန်နိုင်ဆုံး၊ လှစ်အပြနိုင်ဆုံး ရင်ကွဲရှပ်
အင်္ကျီကိုဝတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်...အဲဒီအင်္ကျီကတော့ မြို့ ထဲမှာ ညဘက် ( နိုက်ကလပ်တွေဘာတွေ )
လျှောက်သွားတဲ့ အခါဝတ်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ အင်္ကျီမျိူးဖြစ်ပါတယ်..." သူမရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာရေးခဲ့ 
" ကျွန်မလိုပဲ ထိုဘာသာရေးဆရာကြီး ဟောပြောတာကို သံသယရှိတဲ့ အမျိူးသမီးတွေကိုလည်းကျွန်မ
နှင့် အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကျွန်မတို့ ရွှေရင်အစုံတွေရဲ့ သဘာဝလွန်စွန်းအားတွေကိုပူးပေါင်းစုစည်းကြဖို့ 
တိုက်တွန်းပါတယ်...ပြီးတော့ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုက်သလောက်သာ အတိုလေးတွေဝတ်လာဖို့ ပါပဲ....
ကျွန်မတို့ ရဲ့ မြင်သူတကာဖောက်ပြန်စေနိင်လောက်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအလှအပတွေရဲ့ စွမ်းအင်တွေစုစည်း
လိုက်မယ်ဆိုယင်တော့ ငလျင်တစ်ခုလှုပ်မှာ သေချာပါတယ်... အကယ်၍မြေငလျင်မလှုပ်ခဲ့ ဘူးဆိုယင်
တော့ Sedighi အနေနဲ့ ဘာကြောင့် အခုလိုဖြစ်မလာရသလဲ ဆိုတာယေဘုယျကျတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု
ပေးနိုင်လိမ့် မယ်လို့ ကျွန်မ အသေအချာယုံကြည်ပါတယ်..." လို့ သူမကပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
အချက်အလက်တစ်ခုမမှန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ ကိုယ့် ကိုယ်ကို ဖော်ကြ၊ ပြကြတော့ မယ်ပေါ့...
Posted by peter kyaw | at 12:43 AM | 8 comments
ခေတ်မှီတိုးတက်နေတဲ့ မလေးရှားရဲ့ ပဲ့ ကိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ ဒေါက်တာမဟာသီယာ...
တာဝန်ကား... နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအခြေအနေများနစ်သထက်နစ်အောင်ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြခြင်းခံနေ
အကယ်၍သာ ရတနာသြောန်အရွမ် သာ သူမဆန္ဒရှိသလိုစီမံခွင့် ရခဲ့ လျှင် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ယခင်ဝန်ကြီး
ချူပ်ဟောင်းကို ခေတ္တခဏမျှခေါ်ယူပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအခြေအနေကို ပြောင်းလဲပစ်စေဖို့ အကူအညီတောင်းမိ
" ကျွန်မတို့ ဒေါက်တာမဟာသီယာကို ငါးနှစ်၊ သို့ မဟုတ် ဆယ်နှစ်လောက် ခဏငှားရမ်းအကူအညီ
သူဟာတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည် စီမံတည်ဆောက်ခန့် ခွဲနိုင်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကို ပိုမိုဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်
နိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ..." လို့ သူမက မလေးရှားနိုင်ငံထုတ် The Star သတင်းစာ ကိုပြောပြခဲ့ ပါ
သူမရဲ့ အလုပ်ကုမ္ပဏီဌာနချူပ်က မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့ မှာရှိတဲ့ အတွက် တစ်နှစ်လျှင်နှစ်
ကြိမ်၊ နှစ်စဉ် သွားနေရသည့် အတွက် ရတနာ အတွက်တော့ မလေးရှားဟာ စိမ်းမနေတော့ ပါဘူး...
မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ တရားမ၀င်ဆူပူဆန္ဒပြမှု၊ စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်ပြီး လူအုပ်ကြီးတွေဖြစ်လာခဲ့ ယင် အခြေအ
နေပိုမိုဆိုးရွားမလာခင်၊ လူအုပ်ကြီးထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်အောင်မများပြားလာခင် ရဲတွေက အလျှင်အမြန်
လူစုခွဲစေနိုင်ခဲ့ တဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းကို သူမကသဘောကျပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်...
အခုထိုင်းမှာဆန္ဒပြနေတဲ့ သူတွေ ( ယခင်ဝန်ကြီးချူပ်ဟောင်းသက်ဆင်ကိုထောက်ခံတဲ့ ရှပ်နီတွေ ) ဟာ
မြို့ လယ်ကောင်ကလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ ပြီးဆန္ဒပြလို့ စီးပွားရေးတွေထိခိုက်ကျဆင်းစေမယ့် အစား ပန်းခြံ
တွေ၊ ကစားကွင်းတွေမှာသွားရောက်စုရုံးဆန္ဒပြသင့် ပါတယ် လို့ သူမကဆိုပါတယ်...
ရတနာ ကတော့ လက်ရှိဝန်ကြီးချူပ် အဘီဆစ်ဝိဇ္ဇာဂျီဝ ရော၊ သူ့ အယင်ဝန်ကြီးချူပ်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ သက်ဆင်
" သက်ဆင်ကတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် အနိုင်ရဖို့ ကိုပဲအလေးထားပြီး အဘီဆစ် ကတော့ လူတိုင်း
ကို ကောင်းမွန်ချိူသာစွာဆက်ဆံချင်ပါတယ်...နိုင်ငံရေးမှာတော့ ဒီလိုလုပ်လို့ မရပါဘူး... ( ခေတ်စားနေ
တဲ့ ရန်၊ ငါ စည်းခွဲခြားရမယ်ပေါ့ ဗျာ...) ..." လို့ သူမကပြောခဲ့ ပါတယ်...
အာရှနဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှ တို့ ရဲ့ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေထဲမှာ မ
လေးရှားဝန်ကြီးချူပ်ဟောင်း ဒေါက်တာမဟာသီယာမိုဟာမက် လည်းပါဝင်ပါတယ်...
၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့ တဲ့ အာရှငွေကြေးအကြပ်အတည်း ( financial crisis ) မှာ အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ နိုင်ငံ
တကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ( IMF ) တို့ ကအကြံပေးချမှတ်ခဲ့ တဲ့ စည်းကမ်းတွေ ( အဲဒီစည်းကမ်း
တွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်လျှင် ငွေချေးမယ် ...) ကိုဆန့် ကျင်ပြီး စီးပွားရေး
ကျဆင်းပြီး အကြွေးတင်ကာ အခက်အခဲဖြစ်၊ ပြိုလဲတော့ မယ့် ကုမ္ပဏီကြီးတွေ ကိုနိုင်ငံတော်ကနေ ငွေအ
ရင်းအနှီးထုတ်၊ ကျောထောက်နောက်ခံပြုကာ အဆိုပါစီးပွားပျက်ကပ်ကြီးကို အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်း
ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ လို့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အံ့ သြချီးကျူးမှုကိုခံခဲ့ ရတာပါ...
( အခုတော့ လည်း လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ကဖြစ်ခဲ့ တဲ့ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးပျက်ကပ်မှာ အမေရိကန်လည်းဒေါက်တာ
မဟာသီယာရဲ့ အတွေးအခေါ်အတိုင်းနိုင်ငံတော်ကနေ၀င်ရောက်ကူညီကယ်တင်ခဲ့ ပြီးအခုဂရိမှာဖြစ်နေတဲ့ 
ငွေကြေးအကြပ်အတည်းကို လည်းမဟာသီယာရဲ့ နည်းအတိုင်းဥရောပသမဂ္ဂက ငွေကြေးထောက်ပံ့ ပြီး
အတိုက်အခံတွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ တော့ ( အခု အန်ဝါအီဗရာဟင် ကိစ္စ မှာ ) ရက်ရက်စက်စက် နိုင်ငံရေး
သေအောင် နှိပ်ကွပ်တတ်တာရယ်၊ ဒေသခံမလေးလူမျိူးတွေကို နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့ တ၇ုတ်၊ အိန္ဒိယလူ
မျိူးတွေထက် နိုင်ငံရေးအခွင့် အရေး၊စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့် တွေပိုပေးတာ စတာတွေကြောင့် သဘောအ
နည်းငယ်မကျတာကလွဲယင် လူဦးရေပိုများပြီးနိုင်ငံပိုကျယ်တဲ့ မလေးရှားကို ခေတ်မှဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်အောင်
လုပ်နိုင်ခဲ့ တဲ့ ဝန်ကြီးချူပ်ဟောင်းဒေါက်တာမဟာသီယာကိုတော့စင်ကာပူဝန်ကြီးချူပ်ဟောင်းလီကွမ်ယူ
စင်္ကာပူက ဘဘလီ ( လီကွမ်ယူ ) ကိုလည်း ၉၀ ကျော်ခုနှစ်များက ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုက ခွဲထွက်ခဲ့ 
တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုကနေ သူတို့ တိုင်းပြည်ကို ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်အောင်စီမံအုပ်ချူပ်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ ဖူးပါသေး
ဒေါက်တာမဟာသီယာ နဲ့ လီကွယ်ယူ တို့ ဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ ထောင်စုနှစ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုအရှိဆုံးအာရှ
လူသားဆုကိုလည်း ပူးတွဲရရှိခဲ့ ပါသေးတယ်...
နှစ်ဦးစလုံးကလည်း ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ( ဒေါက်တာမဟာသီယာ
ကတော့ နောက်ကွယ်ကနေ ယခုလက်ရှိအာဏာရ ပါတီကိုအကြံပေးနေပြီး၊ လီကွမ်ယူကတော့ စင်္ကာပူရဲ့ 
လက်ရှိအာဏာရပါတီမှာ သက်တော်ရှည်၊ ဥသျှောင်ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူအကြံပေးနေဆဲဖြစ်ပြီး...) သြ
ကျွန်တော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးလည်း အခြေအနေတွေပေးခဲ့ မယ်ဆိုလျှင် တစ်ချိန်မှာတော့ ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး
ထက် ကမ္ဘာမှာ ပိုမိုထင်ရှားပြီး သြဇာတက္ကိမကြီးမားမဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပေါ်ထွက်လာမှာအသေအချာပါ
သူတို့ ကလည်းအဲဒါမျိူးကိုစိုးရိမ်လို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို အခုလိုပဲနွံနစ်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းပြီး ကူညီသလိုနဲ့ အ
ဆင်းဘီးတပ်ပေးနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ ပေါ့ ...
တဲကနေတိုက်ဖြစ်လာယင် ကိုယ့်ပြတင်းပေါက်တွေပိတ်မယ်၊ တဲရှင်ချမ်းသာလာယင်၊ သြဇာအာဏာရှိလာ
ယင် တဲရှင်သားသမီးတွေကိုအနိုင်ကျင့် လို့ မရတော့ ဘူး၊ ဈေးပေါပေါနဲ့ ခိုင်းလို့ မရတော့ ဘူးလေ...
BANGKOK: Wanted - Tun Dr Mahathir Mohamad.
Mission? Solve the quagmire beleaguering protest-hit Thailand.
If Ratana Orn-Arun has her way, she wants to "borrow" the former Prime Minister to help Thailand turn around.
The insurance executive is frustrated with the political situation in her country especially with street protests by both camps.
"Can we borrow Dr Mahathir? Maybe for five to 10 years?. He is very good.
"He can restructure the country and make Thailand more developed," she told The Star.
She said she liked Malaysia's methods of handling illegal assemblies, where protesters would be dispersed by the police quickly before the crowd got too big.
"The protesters here should gather in the public parks. Not in the city, closing roads and affecting businesses," she said.
"Thaksin must win and doesn't care how he does it while Abhisit wants to be nice to everybody.
"You cannot be like this in politics."
Posted by peter kyaw | at 1:09 AM |3comments
အိမ်သာထက် မိုဘိုင်းပိုများတဲ့ဆာဒူး၊ အပ္ပနားတို့ တိုင်းပြည်
အချစ်လေးနဲ့ ကြူဖို့ မိုဘိုင်းကပိုအရေးကြီးတယ်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ မိုဘိုင်းဖုံးအသုံးပြုနိုင်မှုက ၎င်းတို့ နေ့ စဉ်ဖြေရှင်းနေရသည့် အညစ်
အကြေးစွန့် ရာတွင်အသုံးပြုရသောအိမ်သာအရေအတွက်ထက် ပိုမိုကြောင်း ကုလသမဂ္ဂကပြုလုပ်သော
တစ်ကိုယ်ရေသန့် ရှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လေ့ လာမှုစစ်တမ်းတစ်ခုတွင်တွေ့ ရှိရပါသည်....
နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ သောအဆိုပါစစ်တမ်းအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ မိုဘိုင်းဖုံးအသုံးပြုသည့် စာရင်းတင်ထား
သူပေါင်းမှာ ၅၆၃.၇၃ သန်း ရှိသည့် အတွက် စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၁.၂ ဘီလီယံရှိသည့် နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ
သို့ သော် အိန္ဒိယနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံမျှလောက်သော အရေအတွက်ဖြစ်သည့်၃၆၆ သန်းသာ သင့် လျော်သည့် တစ်ကိုယ်ရေသင့်ရှင်းမှု ( အိမ်သာ စသည် ) အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အသုံးပြုနိုင်
ခဲ့ သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ပညာရှင်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ကုလသမဂ္ဂတက္ကသိုလ် ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ 
သည့်လေ့ လာမှုစာတမ်းတစ်ခုက ဆိုပါသည်...
" နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေတစ်ဝက်လောက်က ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းဖုံးကို ကိုင်နိုင်လောက်အောင်ကြွယ်ဝနေတဲ့ နိုင်ငံမှာ အခြေခံလိုအပ်ချက်လေးတွေဖြစ်တဲ့ အိနြေ္ဒရရ၊ သိက္ခာရှိရှိ အိမ်သာလေးတစ်လုံးတောင်မရှိ နိုင်တာက
တော့ ဝမ်းနည်းစရာ၊ စိတ်မကြေနပ်စရာကောင်းလှပါတယ်..." လို့ အဆိုပါတက္ကသိုလ်ရဲ့ ညွှန်ကြားရေး
မှူးက ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ လည်း မိုဘိုင်းဖုံးတွေ အလွယ်တစ်ကူမ၀ယ်နိုင်လို့ စိတ်မဆိုးကြနဲ့ ....
လူတစ်ကိုယ် အိမ်သာတစ်လုံးဖြစ်အောင် အယင်စီစဉ်ပေးရဦးမယ်....
Posted by peter kyaw | at 12:42 AM |2comments
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ တဲ့ သတင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုအရ လွန်စွာစိတ်ဝင်
စားဖွယ်ကောင်းလှသော သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတစ်ခု တွေ့ ရှိသိမြင်ခဲ့ ကြရပါတယ်...
အဲဒါကတော့ ကွယ်လွန်သူ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဥက္ကဌ မော်စီတုံးနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး
၀န်ကြီး ဟင်နရီကစ်ဆင်ဂျာတို့ ရဲ့ စကားပြောခဲ့ တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါပဲ...
" ခင်ဗျားသိတဲ့ အတိုင်း (ကျွန်တော်တို့ ) တရုတ်ပြည်က အလွန်ဆင်းရဲပါတယ်...ကျွန်တော်တို့ မှာဘာမှ
များများစားစားမရှိပါဘူး....မိန်းမတွေပဲပေါပါတယ်...ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ အလိုရှိမယ်ဆိုယင် နည်းနည်း
ပါးပါး အယောက်တစ်သောင်းနှစ်သောင်း လောက်တော့ ပေးနိုင်ပါတယ်..." လို့ ဥက္ကဌကြီးမော်က ပြော
နောက်ထပ်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ ဥက္ကဌကြီးက ထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းပြန်ပါသေးတယ်..." ခင်ဗျားတို့ 
တရုတ်မလေးတွေ မလိုချင်ဘူးလားဗျာ...ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အယောက် ၁၀ သန်းအထိပေးနိုင်ပါ
တယ်..." လို့ သူက ထပ်ပြီးပြောခဲ့ ပါတယ်...
ဥက္ကဌကြီးကသူ့ ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ထပ်ပြီးတိုးပေးခဲ့ တာပါလို့ ကစ်ဆင်ဂျာ ကရေးမှတ်ထားခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အမျိူးသမီးတွေသိပ်ပေါတယ်ဗျာ...သူတို့ ကတစ်ချိန်လုံးကလေးတွေပဲမွေးနေကြ
တာမို့ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ ကလေးတွေလည်း အများကြီးဖြစ်နေပါပြီ..." လို့ ဥက္ကဌကြီး မော်ကပြောခဲ့ 
" ဒါဟာအင်မတန်ဆန်းကြယ်တဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်...ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ လေ့ လာစူးစမ်းရပါ
ဦးမယ်..." လို့ ကစ်ဆင်ဂျာ ကပြန်ပြောခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါ စကားပြောဆိုချက်များဟာ ၁၉၇၃ ခုနှစ်က တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဘေဂျင်းမြို့ မှာ ပြောဆိုခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါ
အခုအထိတော့ ထိုစဉ်ပြောခဲ့ တဲ့ တရုတ်အမျိူးသမီး ၁၀ သန်းကို အမေ၇ိကန်နိုင်ငံသို့ မပေးဖြစ်ခဲ့ တာ
အခုတော့ လူဦးရေထိန်းချူပ်ရေးစီမံချက်ကြောင့်( တစ်အိမ်ထောင် ကလေးတစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်
သာ ယူရမည့် စီမံကိန်း ) တရုတ်ပြည်မှာလည်း မိန်းကလေးတွေတောင်ပြန်ရှားနေပါပြီ...
သူတို့ က သားယောကျာင်္းလေးကိုသာ အလိုရှိကြတာကိုး...
တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ရင်ဝယ်သားကဲ့ သို့ မခြား ကြင်နာသနားပါပေတယ်...
Kissinger noted Mao was “improving his offer,” and the chairman is on record then saying, “We have too many women … They give birth to children and our children are too many.”“It is suchanovel proposition,” Kissinger replied. “We will have to study it.”
Posted by peter kyaw | at 5:32 AM |0comments
မွေးစက ၂ ပေါင်သာရှိတဲ့ ကလေးငယ်...
ချစ်သူရည်းစားဖြစ်သူနှင့် လက်မထပ်ပဲအတူနေခဲ့ သဖြင့်ကိုယ်ဝန်ရှိကာ ကလေးမီးဖွားခဲ့ သည့် ဒူဘိုင်းရဲ့ 
နာမည်ကျော် အဲမရိတ်အဲယားလိုင်း ( Emirates Airline ) က လေယာဉ်မယ်တစ်ဦးဟာ ဒူဘိုင်းကိုပြန်မ
အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိ လစ်ဇ်ကာရီ ဟာ အလုပ်တာဝန်ဖြင့် သူမတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ လေယာဉ်ဟာ
တောင်အာဖရိကကိုရောက်ရှိပြီး၂၄ မျှသာရပ်နားခိုက် မမျှော်လင့် ပဲမီးဖွားခဲ့ ရစဉ်က သူမမှာကိုယ်ဝန်ရှိမှန်း
တောင်မသိခဲ့ ရပါဘူးတဲ့ ...
အခုတော့ ဒူဘိုင်းရဲ့ အစ္စလာမ်ဥပပေများအရ လက်မထပ်ပဲကလေးမွေးခဲ့ မိလို့ သူမအနေနဲ့ ရှစ်နှစ်ကြာနေ
ထိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ တဲ့ နေရာကိုပြန်သွားခဲ့ ယင် အကျဉ်းထောင်ထဲကို အပို့ ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်...
တရားဝင်လက်မထပ်ပဲ ( တရားဝင်လို့ ဆိုတယ်နော်...ကိုယ့် ဘာသာကိုယ်လံကြုတ်လုပ်ထားတဲ့ / လုပ်
မယ့် လက်ထပ်စာချူပ်၊ အခမ်းအနားမျိူးမရပါဘူး...) ချစ်သူရည်းစားဖြစ်သူနဲ့ အတူနေ၊ လွန်ကျူးခဲ့ မိယင်
အနည်းဆုံးထောင်ဒါဏ် သုံးလနှင့် ဒူဘိုင်းကနေ နှင်ထုတ်ပြန်ပို့ ခြင်းခံရမှာပါ...
" အခုတော့ ကျွန်မ လစာမဲ့ ခွင့် နဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်...ဒါပေမယ့် ကျွန်မအနေနဲ့ ဒူဘိုင်းကိုလည်းပြန်သွားလို့ 
မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်...ကလေးမီးဖွားထားလို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး...ဒူဘိုင်းရဲ့ဥပဒေအရ ( ခိုးစားတာလူ
မိသွားခဲ့ ယင် ) ကျွန်မက တရားဝင်လက်ထပ်ထားတာမဟုတ်လေတော့ အခုလိုကလေးပါမွေးခဲ့ ပြီမို့ အ
ဖမ်းခံရနိုင်ပါတယ်...အဲဒီလောက်ကြီးတော့ မစွန့် စားရဲပါဘူး..." လို့လစ်ဇ် ကပြောခဲ့ ပါတယ်...
အိုင်ယာလန်မှ ဖြစ်သောလစ်ဇ်က သူမအနေဖြင့် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ အမျိူးသမီးတို့ သဘာဝ လစဉ်ပွင့် 
သောပန်းကလည်း ပုံမမှန်ဖြစ်တတ်လို့ သူမဗိုက်အောင့် တဲ့ အခါ အစာအိမ်နာဖြစ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့ မိလို့ အ
စာအိမ်ဆေးတွေသာ သောက်သုံးခဲ့ ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
သူမရဲ့ ဆီးနဲ့ သွေး ကိုစစ်ဆေးခဲ့ တဲ့ ဒူဘိုင်းက ဆရာဝန်များကလည်းဆေးဆက်သက်ဖို့ ကိုပဲညွှန်ကြားခဲ့ 
ကြပါတယ်....( ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ မပြောခဲ့ ကြပါဘူး...)
လွန်ခဲ့ တဲ့ ဇန်န၀ါရီလက သူမရဲ့ လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ထောက်နားတဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ဂျိူဟန်န
ဘတ်မြို့ ရောက်တော့ မှသာ အဖြစ်မှန်ကို သိရှိကာကလေးမွေးဖွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
" ဗိုက်တွေအောင့် စဉ်တုံးကများဆိုယင် အလွန်ကိုမခံမရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ ရပြီး၊ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ
ကလေးက ( ၀မ်းထဲကနေ ) အပြင်ကိုရောက်နေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်... တစ်ကယ့် ကိုထိတ်လန့် တုန်လှုပ်
ခဲ့ ရတာပါပဲ..." လို့ Emirates Airline မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ လစ်ဇ် ကပြောပြပါတယ်...
မွေးကာစက ၂ပေါင်သာ အလေးချိန်ရှိတဲ့ ကလေးငယ် အလက်ဇန်းဒြား ကတော့ ဆေးရုံရဲ့ အသည်းအ
သန်ကြပ်မတ်ကုသတဲ့ အခန်းမှာ ၂ လကြာနေခဲ့ ရပါတယ်...
သူမတို့ သားအမိနှစ်ဦးဟာ ယခုအထိတောင်အာဖရိကမှာပဲရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ သူမနဲ့ ချစ်သူရည်းစားဖြစ်တာ
နှစ်နှစ်ကြာခဲ့ ပြီဖြစ်တဲ့ ကလေးရဲ့ အဖေဖြစ်တဲ့သြစတေးလျနိုင်ငံသား ကတော့ ဒူဘိုင်းမှာပဲ ရှိနေကာ သူမ
တို့ ကိုလာရောက်မတွေ့ ဆုံနိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်...
အလားတူအဖြစ်မျိူးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ ရွှေပြည်ကြီးက လှသည်၊ လည်သည်၊ သို့ သော် လွယ်သည် လို့ ဆို
နိုင်တဲ့ မမတစ်ယောက်လည်း အသွေးအသားကိုတင်ကာ အလှူပေးရတာကို ကလေးကစားသလိုထင်ကာ
သူပေးမ၀ခဲ့ လို့ နောက်ဆုံး မထွေးနိုင်မအံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ ကာ ရေချိူးခန်းထဲမှာတင်ကလေးမွေးခဲ့ ရပြီး ( နောက်
တော့ဆေးရုံသို့ ပို့ ခဲ့ ရကာ အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်သွားပြီး ရဲအဖမ်းခံခဲ့ ရကာ )ဒူဘိုင်းရဲ့ နာမည်ကျော်ကြယ်
ငါးပွင့် အဆင့်ရှိ အကျဉ်းထောင်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ ရတဲ့ သတင်းဟာ ဒူဘိုင်းကရွှေမြန်မာအသိုင်းအ၀န်း
တင်မက၊ တစ်ခြားသောနိုင်ငံသားတွေအထိပါ ရိုက်ခတ်သွားခဲ့ ရပါတယ်...
အဆိုပါ ကျေးဇူးရှင်မမ နှင့် တစ်ဟိုတယ်ထဲ အလုပ်လုပ်နေခဲ့ ကြတဲ့ ကိုရွှေများကတော့ ဘယ်သူနဲ့ ရ
မှန်းတောင်သေသေချာချာမသိတဲ့ ( သူမက မိုးစပါး၊နွေစပါး၊ သီးထပ်၊သီးညှပ် နဲ့ လယ်ကိုအနားမထား
စိုက်ပျိူးခဲ့ သည်လေ.....)ကိုယ်ဝန်မီးဖွားစားရိတ်အတွက် သူမ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဟိုတယ်က အကုန်မစိုက်
ပေးလို့ အားလုံးစုပေါင်းပြီးထည့် ဝင်ကာ ကုသိုလ်ယူလိုက်ကြရသေးတယ်လို့ လည်းကြားမိရကြောင်း
ထိုမမ ပိုက်ဘောမိပြီးမှ ၀င်ပြီးအားပေးတဲ့ ကိုရွှေလှည်းကျိူးထမ်းလည်းရှိသေးတယ်လို့ ဆိုပါသေးတယ်...
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ကတော့ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိူးလည်းမျက်နှာပျက်ရ၊ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းဘ၀
ပျက်၊ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ရ ( သူမ ကတော့ အဲဒီလိုတောင်ယူဆပါ့ မလားမသိ၊ တစ်ရွာမကောင်း အခြား
ရွာပြောင်းလေမယ်လို့ စိတ်ကူးမိလေသလားမသိ ) နဲ့ အလုံးစုံပျက်စီးခြင်းဆိုက်ခဲ့ တာပါပဲ....
An air stewardess fears she can't return to Dubai where she lives because she has hadababy out of wedlock. Ex-pat Liz Curry, 30, didn't even know she was pregnant when Alexandra was born duringa24-hour stopover in South Africa.
Liz said: "I'm on unpaid leave at the moment but I can't go back to work in Dubai - not just because I'manew mother but also because of the law. I'm unmarried so if I'd had the baby in Dubai I would have been arrested and I can't take that risk."
Liz, from Ireland, said female cabin crew often have unusual menstrual cycles - she thought her stomach pains were ulcers so began taking tablets. Doctors in Dubai ran urine and blood tests and told her to stay on the medication. She only found out the truth in her Johannesburg hotel room in January.
Liz, who works for Emirates, said: "The cramps were horrendous and withinafew minutes there wasababy. I was in complete shock."
Alexandra, who was just over 2lb, spent two months in an intensive care unit. The pair are still in South Africa but the baby's Australian dad, who lives in Dubai and who has been with Liz for two years, has not been able to see them.
Posted by peter kyaw | at 12:19 PM |0comments
COURT ROUND-UP Final acquittal for man in girlfriend's murder case
ကဲ...အခုတော့ သူမကို ဘယ်သူတွေသတ်ခဲ့ တာလဲ....
၎င်း၏ရည်းစားမိန်းကလေးကိုသတ်မှုဖြင့် တစ်နှစ်နီးပါး အချူပ်အနှောင်ခံခဲ့ ရသည့် စားပွဲထိုး ( သတင်း
တွင်မှားပြီးဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်...အမှန်မှာ ထမင်းချက်တစ်ဦးဖြစ်သည်...) တစ်ဦးကို ဒူဘိုင်းတရားရုံး
က နောက်ဆုံးတွင် အပြစ်မရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးလွှတ်ပေးခဲ့ ပါသည်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ဆန်တိုရှကာအဘိုတီ ( Santo Shaker Abourti ) ကို ၎င်း၏ရည်းစား မြန်မာအမျိူးသမီး
တစ်ဦးအားသတ်ဖြတ်မှုတွင် အပြစ်မရှိကြောင်း( ပြစ်မှုမထင်ရှားကြောင်း ) တရားရုံးတော်က ကြေငြာခဲ့ 
သူ့ ကိုလွန်ခဲ့ သောနှစ်က (ဗယ်လင်တိုင်းဒေး ) ချစ်သူများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သူ၏ရည်းစားဖြစ်သူ
မိန်းကလေးနှင့် အတူကျင်းပခဲ့ ပြီးထိုမိန်းကလေးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ မှုဖြစ်တရားစွဲဆိုခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်...
တရားသူကြီးမိုဟာမက်နာဘီလ်ရီယဒ် ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ ဝင် ၇ ဦးပါဝင်တဲ့ တရားသူကြီးအဖွဲ့ က အောက်
တရားရုံးက တရားခံဖြစ်သူမှာ ပြစ်မှုမထင်ရှားသည့် အတွက်အမှုမှကင်းလွတ်ကြောင်း အမိန့် ကြေငြာချက်
ကို ဆက်လက်အတည်ပြုခဲ့ ကာ အစိုးရဥပဒေအကျိူးဆောင်များရဲ့ ငြင်းဆိုလျှောက်လဲချက်ကိုပယ်ချခဲ့ ပါ
လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ ကတရားခံ Abourti ဟာ သေဆုံးသူမိန်းကလေးကို မြေပြင်ပေါ်
လဲကျအောင်တွန်းထိုးခဲ့ လို့ သူမရဲ့ ဦးခေါင်းမှာဒါဏ်ရာရရှိခဲ့ တယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်...
ပြီးတော့ ၎င်းဟာသူမကို လည်ပင်းညစ်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ အိတ်အတွင်းမှ ဒါဟမ်း( ယူအေအီးနိုင်ငံသုံးငွေ ) ၃၀၀
ကိုနှိုက်ယူခဲ့ ကာအလောင်းကို ယူအေအီးနိုင်ငံ ရှာဂျားပြည်နယ်အနီး ( ဒူဘိုင်းနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းကပ်
လျက်ရှိပါသည်...) အယ်နာဒါးရပ်ကွက်က ရေဆိုးမြောင်းကျင်းအတွင်းပစ်ချထားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
လူသတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ စွပ်စွဲဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ ရတဲ့ တရားခံ Abourti မတက်ရောက်တဲ့ ကြားနာမှုမှာ သူ့ 
တရားခံအနေနဲ့ အယူခံတရားရုံးကနေ လွန်ခဲ့ တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ က ၎င်း၏ရည်းစားအမျိူးသ
မီးကို ကြိုတင်ကြံစည်သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် ထောင်ဒါဏ် ၁၅ နှစ်ကျခံစေရန်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ မှုကို သက်သေအ
ထောက်အထားမခိုင်လုံဟု ဆိုကာအပြစ်မှ လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
တရားသူကြီးများပါဝင်တဲ့ ခုံရုံးအဖွဲ့ က မူလတရားရုံး ( ဒေသတရားရုံး ) ကနေ့ လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ဒီဇင်ဘာလ
ကချမှတ်ခဲ့ တဲ့ ( ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ) အမိန့် ကို ပလပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
မူလတရားရုံးက တရားခံကိုပြစ်ဒါဏ်များကျခံအပြီးမှာ ယူအေအီးနိုင်ငံကနေနှင်ထုတ်ဖို့ ကိုလည်းအမိန့် ချ
၎င်းရဲ့ ပထမပိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ထံအစစ်ဆေးခံချက်များဟာ အတင်းအကျပ်ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်စေပြီး၊ဖိအား
များစွာပေးခဲ့ ကြလို့ ဝန်ခံခဲ့ ရတာဖြစ်တယ်လို့ တရားခံကပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
၎င်းအပြင် ရဲစခန်းမှာ ၎င်းရဲ့ ထွက်ဆိုချက်များဟာလည်း ( လိမ်လည်ပြန်ဆိုခြင်းမပြုပါဘူးလို့)ကျမ်းကျိန်
ထားတဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုသူ မပါပဲပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ ခုံရုံးအဖွဲ့ ကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
၎င်း၏ရဲတပ်ဖွဲ့ သို့ အစစ်ခံချက်အရ သူဟာ သေဆုံးသူကိုအိတ်တစ်လုံး လက်ဆောင်ပေးခဲ့ တယ်လို့ ဆိုခဲ့ 
ပေမယ့် သက်သေခံပစ္စည်းနဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေထဲမှာတော့ အဆိုပါအိတ်နှင့် အိတ်အကြောင်းမပါရှိခဲ့ ပါ
သူမအနေနှင့် ၎င်းကို ယူအေအီးနိုင်ငံသုံးငွေ ဒါဟန်း ၂၀၀ ပေးဆပ်ရန်ရှိတာကြောင့် ( ထိုငွေကိစ္စကြောင့် 
အချင်းများပြီး ) အဆိုပါ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားက သူမကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်...
ထိုအချက်ဟာလည်း ၎င်းဟာသူမကို လက်ဆောင်ဝယ်ပေးခဲ့ တဲ့ အပြင် ချစ်သူများနေ့ မှာပါ အပြင်ကိုခေါ်
ကာချိန်းဆိုတွေ့ ဆုံခဲ့ တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ဆန့် ကျင်နေပါတယ်...
မျက်မြင်သက်သေများရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေဟာလည်း တရားခံကိုအပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်လောက်
အောင် မပြည့် စုံ၊ မလုံလောက်ပါဘူးလို့ တရားသူကြီးအဖွဲ့ ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါတယ်....
ဒီသတင်းဖတ်ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာမကောင်းတာတော့ အမှန်ပါ....
လူသတ်မှုစတင်ဖြစ်ကတည်းက ဒီအိန္ဒိယသား မသတ်တာဖြစ်နိုင်လောက်တယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ ပါတယ်...
သူမအလောင်းကိုတွေ့ ရှိခဲ့ တာက လမ်းဆုံ၊လမ်းခွ ရေမြောင်းဖုံးတွင်းထဲမှာဖြစ်ပါတယ်...
လမ်းလေးခွအလည်မှာ လူတစ်ယောက်ကို ထိုးကြိတ်ကာလည်ပင်းညစ်သတ်ပြီး အ၀တ်အစားများအားလုံး
ချွတ်ကာအဖုံးနဲ့ ရှိနေတဲ့ တွင်းဝကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကို လူတစ်ဦးတည်းက နေပိပိရိရိထိုးထည့် စွန့် ပစ်ထား
ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ...
ပြီးတော့ ထိုနေရာနားမှာပင် ထိုစဉ်က ဆောက်လက်စ တိုက်တစ်ခုရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများနေတဲ့
သူမနေတဲ့ အဆောင်နဲ့ လည်း မျက်စောင်းထိုးလောက်သာရှိပါတယ်...
ပြီးတော့ လည်ပင်းညစ်ကာအသတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ လူသတ်သမားရဲ့ လက်ဗွေ၊
ဒီအန်အေ စစ်နိုင်လောက်တဲ့ သက်သေတော့ရှိခဲ့ မှာအမှန်ပါပဲ...
လူအုပ်စု၊ သို့ မဟုတ် ကားတစ်စင်းပေါ်ပါလောက်တဲ့ လူသုံးလေးဦး အနည်းဆုံးလောက်ကသာ သူမအ
လောင်းကို အခုလိုစွန့် ပစ်နိုင်လိမ့် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
ဒူဘိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ အမှုစဖြစ်ဖြစ်ချင်း သတင်းတွေမှာပါတဲ့ အတွက် သူ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အနီးစပ်
ဆုံးသံသယရှိသူ အဆိုပါမိန်းကလေးရဲ့ ရည်းစား အိန္ဒိယသားကို တရားခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးကာအမိန့် 
ချ၊ ထောင်ဒါဏ်အပြစ်ပေးခဲ့ တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
နောက်ပိုင်းထိုအမျိူးသားအတွက် ဒူဘိုင်းရှိအိန္ဒိယလူမျိူးအသိုင်းအ၀န်းရော၊ သံရုံးဆိုင်ရာတွေကပါ အမှု
မှာဝိုင်းဝန်းကူညီကြလို့ အခုလို အမှုမှလွတ်ခဲ့ တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
အခုတော့ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ နောက်ကွယ်ကနေတွန်းအားပေးမယ့် မြန်မာအဖွဲ့ အစည်း၊ သံရုံး စတာတွေ
မရှိလို့ အညတြတစ်ယောက်လိုပဲ ကြွေလွင့် ခဲ့ ရပြီဖြစ်ပါတယ်...
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတုများနှင့် ဝင်ရောက်ပြီး ပိပိရိရိလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ တဲ့ လူသတ်မှုတွေကိုတောင်ပေါ်
အောင်စုံစမ်းထောက်လှမ်းနိုင်တဲ့ ဒူဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ဟာ အခုကျွန်တော်တို့ မြန်မာအမျိူးသမီးတစ်ဦး ရက်ရက်
စက်စက်အသတ်ခံရတာကိုလည်း သေသေချာချာသာစုံစမ်းယင် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်မှာ အမှန်ပဲလို့ ယုံပါ
ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့် ယင် ဒူဘိုင်းမှာ မြန်မာအရေအတွက်တော်တော်များများရှိနေပြီဖြစ်တာမို့ အား
ကိုးလောက်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု တင့် တင့် တယ်တယ်ရှိသင့် နေပြီလို့ ယူဆမိပါတယ်...
After having spent nearlyayear in provisional detention over the murder of his girlfriend,awaiter securedafinal acquittal from the Court of Cassation.
The waiter, an Indian, Santo Shaker Abourti, was pronounced not guilty by the court on the charge of killing his girlfriend,aBurmese national.
He was charged with killing his girlfriend after celebrating Valentine's Day with her last year.
The seven-member jury panel presided over by Judge Mohammed Nabil Riyad upheld the acquittal verdict byalower court and dismissed the contestation filed by the Public Prosecution. It was believed that the victim injured her head after Abourti pushed her onto the ground on February 16 last year. He then allegedly throttled her and dumped the body intoasewer hole in Sharjah’s Al Nahda after taking Dh300 from her pocket.
It is learnt that Abourti was acquitted in absentia. The latter had regained his freedom since February 23 when the Court of Appeals cleared him after he had been sentenced to 15 years in prison for the premeditated killing of his girlfriend for want of sufficient evidence.
The court panel quashed the sentence handed out by the Court of First Instance on December 8 last year. The preliminary court had also ordered his deportation at the end of the jail term.
“The defendant insisted that his confession to the police officers was taken by intimidation and pressure. Besides, his statements in the police station were taken in the absence of as worn translator,” the panel said.
“According to his statement to police, the defendant offered the victimabag asagift while the case papers and evidence did not include that bag. It was believed the waiter killed the victim because she owed him Dh200, which contradicts the fact that he gave heragift and dated her on Valentine’s Day.” Eyewitnesses’ statements were also inadequate to convict the defendant, the panel ruled.
ထိုလူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ စဉ်က ကျွန်တော်တင်ခဲ့ တဲ့ သတင်းဆောင်းပါးပါ....
မျိူးမျိူး( အမည်အရင်းမဟုတ်ပါ ။ ) သည်ယူအေအီးနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သောဒူဘိုင်း
အခြေစိုက် Emirates Airline ၏ customer service ဌာနတွင်အလုပ်ခန်.အပ်ခြင်းခံရသည်။
business class ဖြင်.ဆိုက်ရောက်၊လိုက်ပါမည်.ခရီးသည်များနားနေရာခန်းမ lounge တွင်ဧည်.ခံကြို
သို.သော်သူမ မသိနိုင်ခဲ.သည်ကဒီ ဒူဘိုင်းသို.ရောက်လာသူများကယခင်သူမ၊မလေးရှားတွင်တွေ.
တစ်ဦးမို.လုပ်ငန်းခွင်တွင်သူမကို ”ပျိူလေးတို.အိမ်ဦးဆပ်သွားဖူးကိုအုံသည်.ကျေး ” ပမာပိုးပန်းသူ
ထိုနေ.ညမှစ၍သူမအဆောင်သို.ပြန်မရောက်လာနိုင်ခဲ.ပေ... တစ်ရက်၊နှစ်ရက်၊သုံးရက်... သူမအခန်း
Missingwoman’s body found in sewer
&amp;lt;font size="2" color="#000000" face="Verdana"&amp;gt;&amp;lt;A href="http://gulfnews.advertserve.com/servlet/click/zone?zid=22&amp;amp;amp;pid=0&amp;amp;amp;lookup=true&amp;amp;amp;position=1" target="_top"&amp;gt; &amp;lt;IMG src="http://gulfnews.advertserve.com/servlet/view/banner/image/zone?zid=22&amp;amp;amp;pid=0&amp;amp;amp;position=1" height="250" width="250" hspace="0" vspace="0" border="0" alt="Click Here!"&amp;gt; &amp;lt;/A&amp;gt; &amp;lt;/font&amp;gt;
Posted by peter kyaw | at 1:42 AM |3comments
Umbrellas at dawn as politicians hurl eggs and smo...
Can it really be true thatbacrazed Iranian cleri...
Meet Einstein, the world's smallest horse who weig...
Unmarried air stewardess faces jail in Dubai for h...
COURT ROUND-UP Final acquittal for man in girlfrie...
Theme park attraction or freak show?
Big Bud - the World’s Largest Farm Tractor
Passenger offers wife to taxi driver for sex to se...
Croatian girl switches to speaking in German after...
ရွှေပြည်အတွက်ဈေးကွက်သစ်.... ဂျပန်နိုင်ငံမှ အချိူရည...
Barbaric spectacle: Orangutans kickbox and para...
Yemeni child bride dies after intercourse
Therapist sets patients on fire
Woman finds $88billion in her bank account, but ca...
Woman's boyfriend nearly died when she suffocated ...
Punch-drunk priest hitsamourner at funeral he wa...
သူတို့ ပိုက်ဆံ၊ အဖိုးတန်မျာ...
Swinging into action, the Thai police officer who ...
ဒေါ်လာ ၂ သောင်းတန် ခွေးစံအိမ်